Notsapainay ny serivisy Amazon's Kindle Unlimited | Ireo mpamaky rehetra
Notsapainay ny serivisy Amazon's Kindle Unlimited
Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, ny tahan'ny boky fisaka dia tena havaozina, anisan'izany ny Amazon Kindle Unlimited, izay notsapainay tamin'ny andro farany noho ny fitsapana maimaimpoana 30 andro natolotr'i Amazon ho an'ny mpampiasa rehetra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilazako aminao ny zavatra niainako tamin'ny serivisy ary hampiharako ihany koa izay heveriko fa teboka tsara sy ratsy amin'izany.
Ny fisoratana anarana ho an'ity serivisy ity dia tsotra dia tsotra, raha efa manana kaonty Amazon isika, ny sisa ataonao dia ny manindry bokotra tokana hahazoana ny fanangonana boky be dia be omen'ny Kindle Unlimited antsika, voahidy ao Anaram-bosotra 700.000 25.000 isan-karazany, ny XNUMX amin'ireo dia amin'ny Espaniôla.
Alohan'ny hanambarako ny hevitro momba ny serivisy dia heveriko fa afaka manomboka amin'ny teboka tsara sy ratsy amin'ity serivisy famakiana Amazon vaovao ity isika:
1 Tsara momba ny Kindle Unlimited
2 Ratsy momba ny Kindle Unlimited
3 Ny fandraisako ny Kindle Unlimited
Tsara momba ny Kindle Unlimited
Su vidiny dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo manintona azy, satria ho an'ny habetsahan'ny 9,99 euros afaka miditra amin'ny boky 700.000 XNUMX mahery ianao
Ny fahafahan'ny fampifandrindrana amina fitaovana Amazon hafa dia tsy isalasalana fa tombony lehibe azony atao raha afaka mamaky boky Kindle Unlimited avy amin'ny fitaovana isan-karazany nefa tsy very, ohatra, ilay pejy alehantsika
Ny iray amin'ireo teboka tsara indrindra dia ny fahafaha-miditra amin'ny serivisy amin'ny eReaders, finday avo lenta ary takelaka Ary izany dia tsy mametra anao hividy ireo boky amin'ny fitaovana iray. Ohatra, azo atao ny mividy boky mora be amin'ny Kindle Paperwhite
Mety hisintona ny boky "novidina" amin'ny alàlan'ny serivisy
Ratsy momba ny Kindle Unlimited
Ny isan'ny boky amin'ny Espaniôla dia tsy vitsy satria manana boky 25.000 isika, saingy izy io ny karazany azo isafidianana dia kely Ary na dia manana boky mahafinaritra ao aminy aza isika ary misy zava-baovao hafa, ny ankamaroan'ny boky mahaliana indrindra izay tadiavintsika vakiana dia tsy misy.
Safidin'ny tsy afaka mampiasa an'ity serivisy ity amin'ny eReaders hafa ny tsena dia mametra azy kely
Ireo ebooks alaina dia manana endrika Amazon mahazatra ary mahatonga ny ankamaroantsika tsy mahazo aina
Ny fandraisako ny Kindle Unlimited
Tsy misy isalasalana fa serivisy tena feno izy io, miaraka amina boky mahaliana, ary amin'ny vidiny ambany dia ambany. na izany aza Raha tsy manana Kindle eReader amin'ny maodeliny rehetra isika, heveriko fa serivisy tsy mendrika izany. satria toerana ahafahantsika mamaky tena amin'ny fiononana tokoa no ho amin'ity fitaovana ity.
Raha ny amiko, ohatra, tsy manana Kindle aho, noho izany amin'ny finday finday sy ny tablette ataoko ihany no azoko araraotina, izay inoako marina fa tsy mendrika izany. Marina fa azonao atao ny misintona ireo boky "novidina", mamadika azy ireo amin'ny endrika hafa ary mametraka azy ireo amin'ny eReader hafa, saingy asa tsy tokony hataonao amin'ny serivisy hafa amin'ity karazana ity izany.
Ho an'izay rehetra manana Kindle dia heveriko fa izany no serivisy tsara indrindra azonao alain-tahaka, amin'ny fijerena ny tombony rehetra ananany.
Efa nanandrana ny serivisy Kindle Unlimited vaovao ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba izany?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Notsapainay ny serivisy Amazon's Kindle Unlimited
Heveriko fa mitovy aminao. Ny zavatra tsara momba ny serivisy dia ny € 10 afaka "mijery" ireo boky izay tsy hovidinao ara-dalàna. Na izany na tsy izany, miankina amin'ny ohatrinona na amin'ny kely ny mpamaky anaovanao azy io sa tsia.
Heveriko fa efa nilaza tany an-kafa aho fa ny pejy "upload copie copie" dia olana amin'ireo karazana tolotra ireo.
Etsy ankilany, marina fa azo ampiasaina amin'ny mpamaky alim-pandrefesana ihany izy io, fa azo ampiasaina ihany koa ho an'ny PC sy ny takelaka avy amin'ny marika hafa.
Taita dia hoy izy:
Toa anao, nampiasa ny volana fitsarana maimaim-poana natolotry ny Amazon aho ary izany no hevitro. Na eo aza ny fananana boky be dia be azo isafidianana, tsy misy ireo zava-baovao. Rehefa nanontany an'i Amazon aho hoe hafiriana ny fametrahana boky vao navoaka tao amin'ny Unlimited, dia tsy fantatr'izy ireo, na tsy niriany, ny hanome valiny ahy. Amin'ny maha mpanjifa Canal Plus ahy dia efa fantatro ny faharetany, amin'ny salanisa, ho an'ny sarimihetsika navoaka amin'ity zoma ity hahatratra ny sehatra misy ahy.
Olana iray hafa, amiko, ny karazana boky misy. Raha mpankafy ilay tantaram-pitiavana ianao dia aza mieritreritra an'izany akory, mandehana famonoana.
Saingy ny teboka ratsy indrindra amin'ny rehetra, raha ny fahitako azy dia ny fanavaozana ny famandrihana avy hatrany rehefa tapitra ny volana fitsarana. Tsy fantatro hoe hatraiza no ho ara-dalàna izany fa ratsy fitondran-tena mazava ho azy mandritra ny fotoana kelikely.
Farany hitadidy ao an-tsaina. Ireo boky alainao amin'ny Unlimited dia tsy ho hita raha mbola manohy mandoa ny sarany isam-bolana ianao. Vantany vao misoratra anarana ianao, na efa novakinao na tsia, dia hanjavona ao amin'ny tranombokinao izy ireo.
Mamaly an'i Taita
crystell dia hoy izy:
Salama maraina daholo, manana fanontaniana aho… misy boky sasany izay manefa anao mora vidy kokoa raha voasoratra anarana ao amin'ny Unlimited, fantatrao ve fa voafafa ihany koa ireo rehefa manafoana ny famandrihana? mbola nividy azy ireo ve?
Valiny amin'i Crystell
Lucero espinoza dia hoy izy:
Faly aho amin'ny serivisy, any Etazonia dia mitentina 10 dolara isam-bolana aho, mamela anao ny tolo-kevitro ary manasa anao hisoratra anarana, raha ny fahitako azy dia mendrika izany.
Valiny tamin'i Lucero Espinoza
Lucia Mendez dia hoy izy:
Maso! Havaozina ho azy ny famandrihana fitsarana maimaimpoana ary manomboka tsy misy fampandrenesana mialoha ny sarany! Faly be aho tamin'ny amazona mandra-pamitahan'izy ireo ahy tamin'io.
Valiny tamin'i Lucía Méndez
Havaozina io ary tsy ampandrenesin'izy ireo akory ny fiampangana anao… .ary mandeha ho azy… tamin'ny fotoana voalohany nanaovan'i amazona ahy… ankoatry ny fananana boky tranainy sy tsy natonta….
Inona kay ity lahatsoratra ity, tsy haiko izay mitranga androany fa tsy miraharaha ny olona hanoratra lahatsoratra mendrika akory ny olona. Amin'ny fametrahana an'io ratsy io dia tsy mandeha amin'ny fitaovana hafa izy io ary manoratra tsipika 3 diso tsipelina dia afa-po izy ireo. Ho marina izany fa ny internet dia natao ho an'ny subnormaly!
Namoaka boky roa momba ny Kindle tsy voafetra aho: MISY AZO ATAO, sy LOS DELIRIOS DEL BALCONING. Tsy dia mahazo vola be amin'ny famakiana ianao, fa mahafa-po kosa ny mahita fa mamaky ny boky iray manontolo sy ireo hevitra tsara soratany ny olona.
Ny RAE sy Arturo Pérez-Reverte dia manolotra anay fanontana malaza an'ny "Don Quixote"